Nrụpụta ihe nkiri na ụlọ nrụpụta China | Ceres
Ihe nkiri dị oke egwu
Ihe nkiri karịrị akarị
Ihe nkiri Cannabis
Ihe nkiri gbasasịrị
A nabatara nke ọma na ọkụ na -ekesa nwere mmetụta dị mma na uto osisi, njirimara mgbasa ọkụ na -akwalite arụmọrụ photosynthesis nke ukwuu site na ime ka ọkụ gbasaa. Emetula oke ọkụ nke na -agafe na fim ahụ.
Uru nke ihe nkiri mgbasa bụ:
Ọ na-ebelata onyunyo ma na-ahụ maka ikesa oke ọkụ karịa, ọkachasị dị mkpa maka ndo onwe onye, ​​osisi toro ogologo. Ọ bụ ezie na ngụkọta ego nke PAR (Photosynthetic Active Radiation) nke osisi nwetara bụ otu.
Na mpaghara nwere oke ọkụ anyanwụ, Mgbasa ozi nwere ike inye mmetụta jụrụ oyi iji gbochie ọkụ ọkụ nke ihe ọkụkụ.
Ọdịdị nke ihe nkiri agbasara dị nnọọ iche karịa ihe nkiri polyethylene ọkọlọtọ. Nke a bụ n'ihi mgbasa (ịgbasa) ọkụ site na ihe nkiri. Osisi na -eji mgbasa ozi na ìhè yiri ya, ebe anya anyị “na -ahụ” nke ka ukwuu. Nke a na -eme ka ihe nkiri gbasasịa yie ihe gbara ọchịchịrị na ihe jọrọ njọ ma e jiri ya tụnyere ihe nkiri “doro anya”, n'agbanyeghị na nnyefe ọkụ zuru oke ka dị otu.
Ihe nkiri CPT na-egosipụta ihe nkiri 5 nwere nnukwu ọdịnaya EVA.
Nnyefe ọkụ dị elu: 92% fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe nkiri doro anya.
Mgbasa dị elu: nhazi ruo 90%,.
Magburu onwe n'ibu Njirimara.
Mmetụta mgbochi uzuzu maka nnyefe ọkụ dị elu na-aga n'ihu.
Anti-dripping maka ọkụ na obere iru mmiri.
Akwa arụmọrụ ọkụ nke na -egbochi oke ọkụ.
Oké ọnụ ọnụ ：
Ọkpụrụkpụ Oke ：
Ike ọdụdọ na ezumike
Akwụkwọ ntuziaka ASTM D882-12
Mgbatị na ezumike
Nkọwapụta ASTM D1922
Nnyefe ọkụ na PAR
Usoro nke ime
FTIR dị n'ime
Nke gara aga: Ihe nkiri Cannabis
Osote: Ihe nkiri Micro Bubble
Ihe nkiri Micro Bubble
Ihe nkiri Blue Berry
Copyright - 2010-2021: Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Profaịlụ mkpọchi griin haus, Spring Waya N'ihi Ịkpọchi Film, Ihe nkiri Bale Kechie Maka Ọrịre, Profaịlụ mkpọchi ihe nkiri Poly Greenhouse, Profaịlụ na Zigzag Spring Waya, Mkpọchi mkpọchi ihe nkiri Greenhouse, Ngwaahịa niile